'Ninka Madhan' waa Filim Naxdin Leh Oo Aan La Ogaanin
Bogga ugu weyn Filimooyin naxdin lehFilimaanta DaabacaysaHBO (filimo) 'The Empty Man' waa Filim Naxdin Leh Oo Aan La Ogaanin
HBO (filimo)Warar Naxdin LehFilimooyin naxdin lehDib u eegista MuuqaalkaFilimaanta DaabacaysaTrailer (filim)
David Hore ee Ninka faaruqa ah ayaa si tartiib tartiib ah ula wareegay buzz-ka internet-ka, ugama duwan filimka xun ee aflaanta ah. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaan wax fikrad ah ka hayn waxa ay ahayd. Kii xigay, waxaan bilaabay inaan xuso tixraacyo halkan iyo halkaas. Hadda? Waa meel walba.
Mid ka mid ah filimadii ugu dambeeyay ee ay soo saarto Fox ka hor inta aysan iibsan shirkadda Disney, Ninka faaruqa ah waxay ku saleysan tahay sheekada garaafka leh ee Cullen Bunn waxaana jilaya James Badge Dale oo ah James Lasombra, oo ah booliis hore oo raadinaya gabadha deriskiisa ah ee la la'yahay. Raadintiisu waxay ku qaadaysaa gudaha ujeeddo qariib ah oo ujeedadeedu tahay u yeerista hay'ad ka sarraysa oo u eg sidii halyeey reer magaal ah oo waxoogaa dhiirrigeliyay Wajiga iyo filimo la mid ah bilowgii.
“Habeenka ugu horreeya ee aad maqasho isaga. Habeenkii labaad ayaad arkaysaa. Habeenka seddexaad ayuu ku helaa, ”ayey dhahaan, iyaga oo dejinaya jadwalka filimka iyo jilaayaashiisa maadaama uu runta u dhowaanayo
Dale wuxuu hogaamiyaa jilaa tayo leh Ninka faaruqa ah, oo ay ku jiraan Marin Ireland (Akadeemiyadda Umbrella), Sasha Frolova (Red Sparrow), Robert Aramayo (Xayawaanka Nocturnal), Ron Canada (Xumaan Human The), Iyo Stephen Root (Xafiiska Space), laakiin filimku wuxuu ku nool yahay kuna dhintaa waxqabadkiisa. Nasiib wanaagse, jilaagu wuxuu leeyahay karti uu taa uga jiido.
Isaga Lasombra waa qofkasta oo aan u baahanahay inaan ku dhex galno xaalado aad khatar u ah oo cabsi nagu ah annaga daawadayaasha ah. Isagu waa caqli badan yahay, shucuur badan, kuna dhici karo dhammaan waddooyinka saxda ah. Waxaan dareemeynaa jahwareerkiisa, xiisihiisa, iyo ugu dambeyntiina xanaaqiisa iyo cabsidiisa.
Waxa aan ugu jeclaa filimkan ayaa si aan caadi ahayn ugu xidhan arrinta filimka iigu weyn aniga. Kani waa filim qurux badan oo gaabis-gubasho ah oo qaadanaya waqtigiisa dhismaha xiisad iyo jawi. Kahor iyo kadixiisa ayaa hoosta ka xariiqay inaysan ahayn waxa aad aragto oo keliya, laakiin waxaadan awoodin, inay wax kuu yeelaan. Waxay u fuliyaan si guul leh oo xitaa waxyaabo yaryar ay dejin karaan daawadayaasha, oo markay weynaadaan, cabsi badan oo wejigaaga ku dhacda, waxay dejin doonaan wadnahaaga orod.
Intaa waxaa sii dheer, waxay ku tiirsan yihiin cibaadada argagaxa leh ee siyaabaha saxda ah. Fikradda koox dad ah oo fulinaya ficilo xunxun ayaa ah mid loo adeegsaday laguna xadgudbay argagax, sidaa darteed way fiicantahay in la arko filim qaadanaya trope waxa uu yahay oo lagu fulinayo ganaax si loo dhiso paranoia halyeeyadeeda iyo dhagaystayaasha.
Yaad runtii ku kalsoon tahay noloshaada? Yaad si dhab ah u taqaanaa? Ka sii muhiimsan, waa maxay runti ma ka ogtahay naftaada iyo dadka kugu xeeran hubaal?
James Badge Dale wuxuu ku siinayaa waxqabad aan caadi aheyn Ninka Madhan
Ninka faaruqa ah ku celceliya fikradahan si isdaba-joog ah, iyaga oo ka careysiinaya isla markaana hoosta ka xariiqaya murugada daawadayaasha filimka iyadoo si khabiirnimo leh uga faa'iideysanaya qoraalladii dib-u-dhiska ee Jacques Derrida iyo sidoo kale aragtiyaha aragtida leh ee Nietzsche. Waxaan sii qodan karnaa mawduucyadan – Wax badan ayaan ka idhaahdaa magaca Pontifex Group iyo James Lasombra – laakiin markaan sidaa yeelno, waxaan aad ugu dhowaanay inaan ku dhicino isla halistaas oo ku hanjabaysa inaan u safri doono filimka.
Guud ahaan, Ninka faaruqa ah waa mid aad u cufan oo ugu dambeyntii gebi ahaanba aad u dheer. Dib-u-eegid ahaan waxaa badanaa nalagu dhaleeceynayaa inaan ka hadalno xallinta iyo arrimaha tafatirka annaga oo aan bixin tusaalooyin adag. Nasiib wanaag, taasi maahan kiiska halkan.
Waxaa jira qeyb dhan oo ka mid ah bilowga filimka oo ka hadlaya fikradda ah Ninka Madhan ee ku nool waddan kale koox dad ah. Waxaan ku helaynaa sheeko buuxda oo qiyaastii ah 15 illaa 20 daqiiqo taas oo si muuqata loo tixraacayo goor dambe filimka. Qeyb hoosaadkan oo dhan waa la jari karaa, isagoo goynaya waqtiga filimku socdo illaa iyo inta ka hooseysa calaamada labada saacadood, iyo sameynta sheeko adag, diirada la saarayo.
Nasiib wanaagse, xitaa qaababkan khaldan ma burburin karo waxa la inkiri karo filim weyn oo leh cabsi sharci ah iyo gabagabo runti aan raaxo ku laheyn dhammaan siyaabaha ugu wanaagsan. Ninka faaruqa ah ayaa hadda socda HBO Max oo waxaa lagu heli karaa kireysi barnaamijyada kale ee dhijitaalka ah.
Fiiri goos gooska hoose, oo noo soo sheeg haddii aad filimka ku aragtay faallooyinka!
David KahorHBO MaxJames Badge DaleStephen RootNinka faaruqa ahWaylon Jordan
Nasasho ku Nasso: Qoraa / Qoraa Sawirqaade William F. Nolan wuu Geeriyooday